'नाईके' चल्दा-नचल्दा आर्यनलाई कति घाटा ?
बैकुण्ठराज पराजुली । आर्यन सिग्देलको नाम अनि उनको स्टार पावरले जतिले चिन्छन्, आजसम्म सिनेमामा ‘लभर व्वाई’को रुपमा मात्रै चिनेका छन् । फोटोजेनिक अनुहार अनि अभिनय कलाका कारण चकलेटी व्वाई आर्यनका महिला फ्यानहरु उत्तिकै छन, नकी उनको बिहेको कारण घटे ।
आजका दिनसम्म सिनेमाको पर्दामा ‘लभर व्वाई’को परिचय स्थापित गरेका आर्यन अब भने यो परिचयलाई विस्तार गर्दै एक्शन भुमिकामा प्रस्तुत हुँदैछन् । निर्माण टिमका अनुसार आर्यनको दमदार समेटिएको भनिएको सिनेमा ‘नाईके’ यही मंसिर १९ बाट दर्शकमाझ आउँदैछ । त्यसैले पनि सिनेमामा अहिलेसम्म माया र प्रेमको फुलबारीको कथामा रमेका आर्यनले फरक पहिचान लिएर आउँदा दर्शकलाई कतिसम्म न्याय गर्न सक्छन भन्ने कुरा प्रमुख बनेको छ । सिनेमाको कथा र प्रस्तुतीकरणलाई छाडेर यसको मिडिया हुईम अनि हालसम्म सार्वजनिक गीत र ट्रेलरलाई नियाल्दा नाईके आर्यन पर्दामा आउने दिनको प्रतिक्षा धेरैमा छ । तर नेपाली सिनेमाको ईतिहास कुनै एक कलाकार विशेषको स्टार पावरले निर्माता जोगाउने पक्षमा छैन् । त्यसैले पनि सिनेमाले निर्देशकिय क्षमता कतिसम्म बोकेको छ त्यसले नै आर्यनको स्टार क्रेज बढाउन अनि एक्शन अभिनेताको परिचय स्थापित गर्नमा सहयोग गर्नेछ ।
तर आर्यन सिग्देल नाम कुनै एक सिनेमाले दर्शक हलसम्म तान्दा र नतान्दा चलबल आउने नाम भने होईन्, किनकी माथी उल्लेख भए अनुसार नै उनको अभिनय र पर्शनालिटीको प्रसंशकहरु नेपाली सिनेमालाई नजिकबाट चिन्नेहरु भित्र धेरैछन् ।
जे होस, आर्यनको एक्शन भरिएको भनिएको सिनेमा ‘नाईके’मा उनको अभिनय कस्तो छ, निर्देशकले कस्तो काम गराएका छन, अनि यो सिनेमाले उनको परिचयमा ईँटा थप्छ कि नाई ? त्यसको लागी अब एक हप्ता भन्दा बढी कुर्नु नपर्ला !